Hajao ny fahefako | Martech Zone
Hanaja ny fahefako
Alakamisy, Jona 6, 2013 Alakamisy, Jona 6, 2013 Douglas Karr
Roa taona lasa izay dia nijanona tsy nitady mpankafy sy mpanaraka ahy intsony aho. Tsy te hilaza akory aho hoe tsy te-hanohy hanana mpanaraka, ny tiako holazaina dia tsy nijery intsony aho. Najanoko ny tsy fanitsiana azy ireo teo amin'ny Internet. Tsy niady intsony aho. Tsy nijanona intsony aho rehefa nanana hevitra matanjaka. Nanomboka nahatoky tamin'ny zavatra ninoako aho ary nifantoka tamin'ny fanomezana lanja ny tamba-jotra.
Tsy nitranga tamin'ny mpijery media sosialy fotsiny izany, fa teo amin'ny orinasako ihany koa. Ry namana, mpanjifa, mpiara-miasa… Nandehandeha tamin'ny olona maro aho. Very fisakaizana aho, mpankafy maro, ary mpanaraka be dia be - mandrakizay. Ary mitohy izany. Ny alina hafa fotsiny dia nilazana aho fa tsy sivily amin'ny Facebook ary izany no izy tsy milay. Nampahafantariko ilay olona fa afaka mijanona manaraka ahy izy ireo amin'ny fotoana rehetra.
Ny marina dia, tsy te hanao zavatra toa olona aho fa tsy hanandrana sy hamitaka ny olona hanaraka ahy. Izaho koa tsy manaraka ny olon-kafa izay jereko mampitony ny fanarahana azy ireo. Vanila izy ireo… ary tiako ny Rocky Road.
Ny olona manafangaro ny fanajana sy ny fahefana amin'ny fahaizana mitovy sy mangatsiatsiaka. Tsy te-hanao ezaka amin'ny maha-afaka ahy aho, te-ho be fientanam-po sy mahitsy. Eo amin'ny toeram-piasana, tsy te-hanodidina ny tenako amin'ireo olona miteny aho… Manaja bebe kokoa ny olona aho rehefa miala amin'ny fandihizana ary milaza amiko izay tsy tokony hataoko. Raha tena tianao ny hanenjehako anao eny am-baravarana dia ataovy mahery setra na tsy mivadika. Tsy misy vintana faharoa.
Rehefa mieritreritra ireo olona hajaiko amin'ny Internet aho dia misy zavatra itovizany. Ireto misy vitsivitsy fotsiny eto an-tampon'ny lohako:
Seth Godin - tsy misy manakana an'i Seth hilaza ny heviny. Nahita azy nifampiraharaha tamina mpankafy tafahoatra aho indray mandeha ary nanisy tsipika tsotra fotsiny tao anaty fasika izy ary tsy navelany holaniana mihitsy.
Guy kawasaki - tokony ho 6 taona lasa izay, nanao fanamarihana boriky mahira-tsaina aho momba ny ekipan'i Guy olona nisioka ho azy. Nitifitra avy hatrany izy ary nilaza mazava hoe iza no ao ambadiky ny fitendry.
Gary Vaynerchuk - mangarahara, tsy teolojika ary eo amin'ny tavanao - lazain'i Gary amin'ny mpihaino azy foana izay tokony ho renao.
Jason Falls - Tsy misy mahasakana an'i Jason. Vanim-potoana.
Nichole Kelly - ity vehivavy ity no tampon… mangarahara, mampihomehy toy ny afobe, ary - indray - tsy mahatana
Chris Abraham - Azoko antoka fa manana ny fihetsika mitovy amin'izany izahay sy i Chris isaky ny mahita lahatsoratra politika nosoratan'ilay iray hafa izahay. Tsy mihemotra mihitsy izy ary tso-po sy be fitiavana izy.
Tsy azoko antoka raha misy toa ahy ireo (fantatro marina fa misy amin'izy ireo manamavo ny politika). Saingy tsy maninona izany satria izaho hajao ny fahefany. Fantatro fa rehefa mila valiny marina aho, dia ireto no olona vitsivitsy izay tsy mifoka setroka mihitsy. Tsy hiteny ratsy izy ireo… hiteny izy ireo.
Nandritra izay taona vitsivitsy lasa izay dia fantatro fa mpanjifa sambatra tsy miraikitra foana. Mpanjifa ahazo vokatra tsara anefa dia mijanona eo foana. Ny asako dia tsy ny naman'ny mpanjifa, ny manao ny asako. Indraindray izany dia mitaky ny hanomezako azy ireo rehefa misy fanapahan-kevitra ratsy raisina. Noho ny safidin'ny fitakiana fanajana sy fiantohana ny valiny NA ny fananan'ny orinasan'ny mpanjifako handratra sy handroahana azy ireo - dia homeko azy ireo hatrany ny vaovao ratsy.
Naharary ahy tamin'ny tambajotra sosialy ve izany? Miankina amin'ny tianao holazaina io naratra. Raha kaonty mpankafy sy mpanaraka ny fandrefesanao ny fahombiazanao - dia eny. Tsy refesiko toy izao anefa ny fahombiazana. Norefesiko tamin'ny isan'ny orinasa nanampy anay, ny isan'ny tolo-kevitra raisinay amin'ny alàlan'ny vava, ny isan'ny olona miakatra hisaotra ahy aorian'ny lahateny iray, ny isan'ireo karatra fisaorana mihantona eo amin'ny rindrinay. asa (manana ny tsirairay isika!) sy ny isan'ny olona nifikitra tamiko nandritra ny taona maro.
Ny fanajana sy ny fahefana dia tsy mitaky fifanarahana na fahaiza-manao. Manana mpanjifa mahafinaritra aho, mpiasa marobe, mpamaky mahafinaritra ary namana, mpankafy ary mpanaraka bebe kokoa ilaiko mandritra ny androm-piainako.
Ataovy marina amin'ny mpihaino anao. Izay ihany no fomba mahamarina ny tenanao.
PS: Raha manontany tena ianao hoe iza no tsy hajaiko amin'ny Internet… lava ny lisitra. Amin'izao fotoana izao, ny tampon'ny lisiko dia Matt Cutts. Tsy zavatra manokana izany… Tsy zakako ny valiny ara-politika mahitsy, refesina tsara, ary valiny amin'ny fanontaniana be loatra. Nametraka fanontaniana marimaritra iraisana maromaro aho nandritra ny taona maro, saingy, toa tsy ampy ho azy ny valin-teniko Klout hahafahany mamaly. Mahita azy tsy tapaka miresaka amin'ny iza aho. Angamba zavatra nolazaiko io… tsy fantatro ary tsy raharahako.
Ampio amin'ity lisitra ity izay olona manohy maka sary ny tenany mba hizarany tontolo andro na hiresaka momba ny tenany amin'ny olona fahatelo. Raha mizara ny teniny manokana izy ireo dia tena te-hanindrona an-tenda azy ireo aho. Sayin fotsiny.
Tags: chris abrahamgary vaynerchukGuy kawasakinianjera i Jasonnichole kellyseth godin
Fitsapana azo ampiasaina amin'ny Crowdsourced avy amin'ny UserTesting.com
Jun 7, 2013 ao amin'ny 1: 42 PM
Tokony holazaiko ihany fa ny aingam-panahinao dia nanome aingam-panahy ahy - farafaharatsiny mba hahazoana valiny. Azo antoka - marina amin'ny tenanao. Io no fomba tokana hahafahana mankafy ny asanao. Zavatra iray ihany no nahagaga ahy ahy ary marina izany tamin'ny farany. Tsy tianao ny olona mizara ny teniny manokana. Liana. Matetika aho mifoha amin'ny vao maraina amin'ny eritreritra lalina na roa, ny sasany izay tena mampihetsi-po ahy. Fantatro izao fa mety tsy ho tohina ny hafa, fa aleoko kosa mandre izay ao am-pony, toy izay mamaky zavatra izay nateraky ny hafa (matetika avy amin'ireo antsoina hoe olo-malaza). Ny eritreritro fotsiny.
Jun 7, 2013 ao amin'ny 2: 46 PM
Salama @ fahombiazana: disqus. Tsy manohitra ny filazan'ireo olon-dehibe 'manana' teny nindramina aho… fa rehefa mametraka ny teny nalaina fotsiny izy ireo, miaraka amin'ny teny nalaina, ary ny anarany ao mba hizaran'ny hafa. Toa somary nahasosotra ihany - ny hevitro fotsiny. Azonao atao ny manonona ahy amin'izany 😉
Jun 8, 2013 ao amin'ny 4: 47 PM
“Tsy te-hanao ezaka amin'ny maha-afaka ahy aho, te ho be fientanam-po sy mahitsy. "
Tiako koa ity. Mamaky lahatsoratra foana aho milaza ny kalitaon'ny mpanatrika mihoatra ny habetsany. Toa olona be fahombiazana maro no mahita fa misy olona ho azy ireo ary mifikitra aminy fa tsy manandrana mampifaly ny rehetra. Lahatsoratra tsara.